MacOS Sierra 10.12.6 hadda waa loo heli karaa dhammaan dadka isticmaala | Waxaan ka socdaa mac
MacOS Sierra 10.12.6 hadda waa loo heli karaa dhammaan isticmaaleyaasha
Galabnimadan Arbacada waxaa doortay wiilasha Cupertino si ay si rasmi ah u bilaabaan noocyada ugu dambeeya ee macro Sierra 10.12.6, iOS, watchOS, iyo tvOS. Xaaladdan oo kale, waxa hadda xiisaynaya ayaa ah nooca loo adeegsado dadka isticmaala Mac inkasta oo ay run tahay in noocyadan aaney jirin wax isbeddello ah oo aad u tiro badan marka la barbar dhigo noocii hore, waxaa muhiim ah in la cusbooneysiiyo si looga fogaado dhibaatooyinka weerarrada dhinac saddexaad, hagaajinta xasiloonida qalabka iyo wixii lamid ah.
Markan waxaan wajahaynaa nooca ka horreeya macro High Sierra In kasta oo ay run tahay in Apple ay sii deyn karto nooc u dhexeeya 10.12.6 iyo kan ugu horreeya ee macOS High Sierra, isbeddellada ayaa noqon doona kuwo aad u yar.
Nooca cusubi wuxuu ku darayaa hagaajinta cilladaha, hagaajinta xasiloonida nidaamka, iyo cilladaha cilladaha laga helay noocyadii hore. Ha ka waaban inaad rakibatid cusbooneysiintan cusub sida ugu dhakhsaha badan ee aad awoodid maadaama sidan oo kale aan uga faa'iideysan doonno hagaajinta la hirgeliyey. Sida aynu nidhaahno ma jiraan wax isbeddello ah oo ku saabsan heerka hawlgalka ama wararka muuqda, laakiin marwalba aad ayey muhiim u tahay in Mac-ga la cusbooneysiiyo. Haatan Apple waxay leedahay wajiyo dhowr ah oo kufuran nidaamyada kaladuwan ee kala duwan shaki kuma jiro midka sanadkaan helaya dareenka ugu badan inuu yahay iOS-ka iPad-ka, maadaama riwaayadaha badan ay diirada saarayaan qalabkan shirkada Cupertino.
Si loo cusbooneysiiyo Mac-dayada waa inaan si fudud u tagnaa Mac App Store oo guji tabta Cusbooneysiinta, markaa nooca cusub ee ay tahay inaan soo dejino oo aan rakibno ayaa soo muuqan doona.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » macOS Sierra » MacOS Sierra 10.12.6 hadda waa loo heli karaa dhammaan isticmaaleyaasha
Waxaan hayaa macBook Pro leh Sierra 10.12.5, laakiin markaan isku dayayo inaan cusbooneysiiyo 10.12.6 kumbuyuutarka ayaa ku fariisanaya tufaaxa waana inaan dib u jiido keyd si aan mar kale u kiciyo
Jawaab José Pérez
Isla waxbaa igu dhaca aniga, qof naga caawin kara taas?
Dhammaantiin waad salaaman tihiin !. Waxaan kujiraa neerfaha. Waligey dhibaato kuma qabin Waqtiga Mashiinka, laakiin ka boodidda macOS Sierra laga bilaabo 10.12.5 ilaa 10.12.6 kama dhigeyso keydkeyga Mac. Wuu soo raagayaa marka hore ka dibna "Mashiinka Waqtiga ayaa dhameystiri kari waayey keydka" fariinta. Ma jiraa qof kale oo dareemay? Aad baan u qadarin lahaa faallooyinkaaga.
Wax la mid ah ayaa igu dhacay aniga oo 2 MacBook Pro ah mid ka yimid 2016 kii kalena 2012. Laakiin xitaa mashiinka waqtiga ma aanan helin. Mid waxay ahayd inaan sameeyo rakibo nadiif ah kan ugu da'da weynna xitaa iima ogolaanayo inaan qaabeeyo darawalka adag. Cusbooneysiintan ayaa ka xun virus. Tani waxay u egtahay inbadan oo sidii Windows ah.
Si isku mid ah ayey igu dhacdaa aniga. Ka dib soo kabasho guul leh (wali ma aqaano sida aan ku sameeyay rajo xumo) waan ka tagayaa anigoon cusboonaysiin ilaa 12.13
Heshiiskii Genius Bar ee xishoodka. Sidii oo kale aniga ayaa dhibaatada samaynayay. Runtii tani waxay culeys saari kartaa sumad.
Dhibaato isku mid ah ayaa i haysata, kumana bilaabi karo kombuyuutarkayga ... wuxuu ku xayiran yahay MADOW BADAN oo leh tufaax iyo xatooyo xambaarsan, cusboonaysiintaan cusubi waxay isu rogtay musiibo dhab ah !!!! Ma aqaan wax aan sameeyo…
Jawaab Esteban M.
Waad salaaman tihiin galab wanaagsan, waxaan hayaa Macbook Air (2015), waxaan cusbooneysiiyay 10.12.6 waxaanan bilaabay inaan dhibaatooyin kala kulmo batteriga si dhaqso ah iiga daadiya markuu shaqo la’aan yahay.
Qaar isku mid ah ayaa ku dhacay isaga.
Waxa saxda ah ee igu dhacay aniga ayaa igu qasbanaaday waana inaan ku soo ceshado iyada oo keyd ah timemachine-kayga
Waxaan leeyahay hawo 2011 wax wanagsan ayaan ku sameeyaa 10.12.6 ... mahadcelinteyda iyo kun jeer ka dhaqso badan ciyaarteyda pc 2017
UPSS, waan cusbooneysiiyay oo ilaa iyo hada dhib la'aan.
Waad salaaman tihiin, waxaan hayaa hawo macbook ah laga soo bilaabo sanadkii 2015 kii markii aan cusbooneysiiyayna codku wuu istaagay. Anigu garan maayo sida loo saxo.
Gacaliye, waxaan qabaa wax yar oo dhibaato ah ... ku dhowaad lama dareemi karo;
Waxaa ii soo baxday in markii aan ka baareynayo feylasha ka socda Photoshop CC iyo daaqadda daaqadda pop-up-ka, aan dareemayo in tilmaamahaygu "ku xayiran yahay" fayl. Waa inaan doortaa meel faaruq ah oo galka ah si aan u awoodo inaan hoos u dhigo, oo aan markaa u xusho feyl kale oo aan doonayo inaan arko si aan u dhaqaajiyo. (adigoon wali furin). wax aan igu dhicin aniga oo wata qoraalkii hore ee Mac Os Sierra.
Noocyadayda hadda waa 10.12.6 oo ku saabsan MacBook pro Late 2012.
Waxaan rajaynayaa inaad i fahmi karto oo aad i caawin karto ... waad ku mahadsan tahay horay!
Wax la mid ah ayaa igu dhacay aniga, waxaan cusbooneysiiyaa nooca ugu dambeeya ee macOS Sierra iyo pc-ga ayaa ku burburaya baarka wax lagu raro iyadoo aan horay loo sii socon. Waxay ahayd inaan ku soo cesho kombuyuutarka mashiinka waqtiga
Jawaab harold torres
Tani waa kaftan, ka dib markii aad maalmo qaadatay oo aad i weydiisatay inaan cusbooneysiiyo nooca cusub, nidaamku ma bilaabmayo. Waxaan wacaa tufaax si aan iigu wargaliyo talaabooyinka la qaadayo waxay ii sheegeen in MBP i7 2012-kii uu duugoobay oo uusan sii haynin adeeg farsamo, ha rakibin cusbooneysiintan. Jawaab aan caadi aheyn. Ugu dambayntii waa inaan jiidayaa Mashiinka Waqtiga si aan u soo celiyo maxaa yeelay dib udajin PRAM, tirtirida faylasha .kext ee laga helo terminalka ama wax walba. Mar kasta oo ay sii niyadjabaan
Jawaab Xavi G
watchOS 3.2.3 iyo tvOS 10.2.2 sidoo kale waa la heli karaa si loo soo dejiyo
Isabel Ge Mahe wuxuu noqday madaxa Shiinaha ee Apple